पीएचडीको अध्यापन सुरु – Sajha Bisaunee
पीएचडीको अध्यापन सुरु
। १३ माघ २०७४, शनिबार १५:३० मा प्रकाशित
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व–विद्यालय (एमयू) पछिल्लो समयमा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्दै गएको छ । प्रदेश ६ को शैक्षिक धरोहरका रूपमा रहेको एमयूले व्यवस्थापन संकायमा विद्यावारिधी (पीएचडी)को नयाँ कार्यक्रम विस्तार गरेको छ । स्थापना भएको आठ वर्षमा एमयूले विभिन्न संकायमा स्नातक र स्नाकोत्तरसँगै पीएचडी शुरु गरेको हो ।
एयूले अन्य संकायमा पनि विद्यावारिधीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको बताइएको छ । अन्य संकायमा पीएचडीका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित संकायका डीनको अध्यक्षतामा अध्ययन समिति गठन गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । आगामी तीन महिनामा भित्र उक्त अनुसन्धान समितिले काम थालेसँगै अन्य संकायमा पनि पीएचडीका कार्यक्रम शुरु
गरिने भएको छ । हाल विश्वविद्यालयले स्नातकमा व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी, विज्ञान तथा प्रविधि र इन्जिनियरिङ्ग संकायमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । यस्तै स्नाकोत्तर तहमा व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी संकायमा मात्रै अध्यापन भइरहेको छ ।
विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पक्रियामा रहको छ । स्थापना भएको छोटो समयमा पीएचडी सञ्चालन गरेसँगै एमयूले प्रदेश नं. ६ मा पहिलो पटक विद्यावारिधी (पीएचडी) कार्यक्रममा सुरु गरेको हो । शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा एक समारोहका बीच विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकायमा पीएचडी कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको छ । पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालनमा भएसँगै तीन जनाले आवेदन दिएको बताइएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रदेश ६ का प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेशको विकासका लागि विश्वविद्यालयले अहम भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
शिक्षाका दृष्टिकोणले साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र पछाडी परेको भन्दै उनले अबका दिनमा प्रदेश शिक्षा क्षेत्रमा पनि अब्बल बन्दै जाने बताए । वर्षाैं पूराना विश्वविद्यालयले पीएचडी सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा एमयूले सञ्चालन गर्न लागेकोमा प्रदेश प्रमुख खनालले खुशी व्यक्त गरे ।
एमयूका उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाले व्यवहारिक शिक्षा आवश्यक रहेको भन्दै उनले विश्वविद्यालयले प्रदेशभर शैक्षिक फैलिने बताए । प्रदेशको शैक्षिक क्षेत्रको ठूलो संस्थाका रूपमा विश्वविद्यालयले अबका दिनमा प्रतिनिधित्व गर्ने उनको भनाई छ । सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज रावतले यहाँ स्रोत साधनलाई परिचालन गरेमात्र प्रदेश विकास गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा विज्ञका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालका व्यवस्थापन संकायका पूर्वडीन प्रा.डा. प्रेमराज पन्त, काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका डीन प्रा.डा. विजय के.सी., राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. पुस्कर ब्रजाचार्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालय एमफिल पीएचडी कार्यक्रमका निर्देशक प्रा.डा. माधवराज कोइराला, मप विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्ल लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।